Fisafoana mandritra ny alina Lehilahy telo mitondra antsy lava no tra-tehaky ny polisy
Manoloana ny fitarainan’ireo mpiasa tafody alina amin’ny fanendahana miaro fandrahonana zava-maranitra, nanatanteraka avy hatrany ny fisafoana amin’ny alina ny polisin’ny hery vonjy taitra
na FIP, manerana an’Antananarivo Renivohitra hitandroana ny filaminana. Lehilahy 26 taona miisa roa sy tovolahy 16 taona iray no voasambotry ny polisy ny hery vonjy taitra na Force d’intervention
de la Police nanao fisafoana teny amin’ny faritra 67ha ary natolotra ny polisy avy ao amin’ny kaomisarian’ny 67ha ny alakamisy 26 septambra lasa teo tafiditra ao anatin’ny «opération coup
d’arrêt» noho ny fitondrana antsy lava miisa telo. Tao anatin’izany fisafoana amin’ny alina izany indrindra no nifanena tamina lehilahy miisa telo ny polisy tokony ho tamin’ny 1 ora maraina teo ka tsy nisalasala nanadihady sy nisava azy telolahy. Nahitana antsy tsirairay avy tany amin’izy ireo ka avy dia nentina avy hatrany teny amin’ny kaomisaria ny boriborintany fahafito izy ireo nanaovana fanadihadiana. Fantatra ary fa any Antsalovana izy ireto no nipetraka saingy izao hita teny amin’ny 67ha izao amin’ny andro alina ary mbola nahitana ireo zava-maranitra ireo ihany koa. Miezaka mitety ny lalam-be sy ny faritra mena ary ny elakela-trano ny polisy hamerenana ny laoniny ny filaminana amin’izao ankatoky ny fifidianana izao.